နည်းပညာ မှတ်တမ်း: 2008
/ 23:16 / Comments: (0)
Desktop icon တွေမှာ မြှားတွေပါနေတာ မျက်စိနောက်နေရင် ဖြုတ်ထားကြရအောင်။ ဒီလို ဖြုတ်ထားဖို့ vista shortcut manager freeware သုံးလိုက်ရုံပါဘဲ။ Program download & install လုပ်ပြီး run မယ်။ no arrow ရွေးပေးလိုက်မယ်ဆို logout လုပ်ပြီး နောက်ပိုင်း မြှားတွေ ဖယ်ထုတ်ပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Vista Shortcut Manager 32bit
Vista Shortcut Manager 64bit
Labels: odds and ends, software
/ 22:08 / Comments: (0)
Disk မှာ IDE ထက် SATA က ပိုမြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် SATA Disk Drive ကိုဘဲ နောက်ပိုင်းမှာ တပ်ဆင်မှု များလာပါတယ်။ SATA သုံးနေသူတွေ disk performance တိုးလာအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလေးပါ။
Start menu က search box မှာ Device manager ကို ခေါ်ပါမယ်။ Start \_control panel \_system \_Hardware \_Device manager ကလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Disk drive ကို double click ဖြင့် ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။
ပေါ်လာတဲ့ hard drive မှာ right click ဖြင့် properties ကိုရွေးပါမယ်။
Device properties ရဲ့ policies tab မှာ Enable advanced performance ကို check လုပ်ပေးရင်ရပါပြီ။
သတိပြုစေလိုတာက ဒီ ဆက်တင် ချိန်ထားပြီးမှ battery (UPS မဟုတ်ပါ) လဲရတာမျိုးကြုံရင် data lost ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Labels: odds and ends, speed up
/ 18:56 / Comments: (0)
ဂဏာန်းပေါင်းစက်လိုရင် accessories ထဲမှာရှိတယ်လို့ ပြေးမြင်ကြပါမယ်။ Google site မှာလည်း “ answer to life, the universe, and everything ” ရိုက်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ Vista widget တွေနဲ့ သီးသန့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဆို တောင်ပုံရာပုံ ပါဘဲ။
ခု firefox browser သုံးရင်းလိုအပ်ရင် တွက်ချက်နိုင်အောင်ပါ။ ဒါလည်း Firefox Calculator 1.1.12 addon ရှိသားဘဲ မဟုတ်လား...ဆိုကြပါမယ်။
အဲဒါတွေ အားလုံးထက် ပိုလွယ်တာလေးပါ။ Firefox မှာ အသင့်ပါလာတဲ့ Google search engine မှာ 1+1 ဆိုတာနဲ့ =2 suggestion တန်းပေါ်လာပါတယ်။ သတိမမူ မိသေးရင် ရိုက်ကြည့်ပါဦး။ သချာင်္ သမား ဆိုရင်တော့ functions တွေ သုံးဖို့ ဒီလင့်က အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
Labels: Browser, firefox, odds and ends
FREE 1 Year iolo Search and Recover5License
/ 03:09 / Comments: (0)
မကြာခဏ ကြားတတ်တဲ့ မှားဖျက်ခြင်း ကိစ္စ အတွက် search & recover5သုံးပြီး ပြန်ဖေါ်နိုင်ဖို့ပါ။ နာမည်ကြီး system mechanic က ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ။ ပေးနေတာတော့ ကြာပါပြီ။ ချက်ချင်းမတင်ပေးနိုင်လိုက်ဘူး။ ခု စမ်းကြည့်တော့ အသက်ရှိနေသေးလို့ ရှယ်လိုက်တာပါ။
ဒီလင့်ကနေ ရယူရပါမယ်။ Continue /secure checkout အဆင့်များ ဖြတ်သန်းပြီး register page ဆီ အရောက်သွားပါမယ်။ Prize $0.00 ဖြစ်နေစဉ်ကာလဟာ ဖရီး ကာလပေါ့;)
Register page မှာ ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပြီးရင် continue နဲ့ Thank You! Your Order #21010000000 is complete ရောက်သွားအောင် နှိပ်သွားလိုက်ပါ။ မိမိ မေးလ်မှာ ကီး ရောက်လာပါမယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲလ် ရယူလိုရင် အောက်ကလင့်တွေက ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ဟာ ပုံ မေးလ် ဗီဒီယို အမ်ပီ3 တွေအပြင် ဖိုင်တော်တော်များများ ပြန်ပြီး recovery လုပ်ပေးပါတယ်။ Overwrite မလုပ်ရသေးရင် ဖျက်ထားတာ မကြာသေးရင်ပေါ့းP
license key activate လုပ်ပုံတော့ ချန်ခဲ့ လိုက်ပြီ။
Labels: Free key, Recovery, software
Free BitDefender Internet security 2009 License
/ 02:14 / Comments: (0)
ဖရီးကစ်တွေ ထပ်ကုန်ပြီ။ BitDefender Internet security 2009 ကို ရက်ပေါင်း 120 သက်တမ်းရှိ လိုင်စင်ကီး ပေးနေတာ တွေ့လို့ပါ။ သူကတော့ ဗီယက်နမ် မှာပါ။
သူ့ရဲ့ ရယူပုံကလည်း လွယ်ပါတယ်။ ဒီလင့်လေးမှာ E-mail သာမှန်အောင်ဖြည့် ကျန်တာကတော့ fake fake ပေါ့။ ဗီယက်နမ်စာ က ဘာလည်း ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး။ Send နှိပ်လိုက်ရင် ကီးရပြီ :)
လိုင်စင် သက်တမ်းက 120 ဆိုပေမယ့် trail version သုံးရင် ရက် 30 ဆိုတော့ ရက် 150 ဖြစ်သွားမလားဘဲ။ Translate လုပ်ကြည့်တော့ ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်း activate လုပ်ပါတော့ မဆိုထားပါဘူး။
ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဒေါင်းလုဒ် လိုရင်တော့
BitDefender Internet Security 2009 32bit
BitDefender Internet Security 2009 64bit
BitDefender က ပရိတ်သတ် နည်းတော့ နည်းတယ်။ အသုံးတဲ့သူ တွေ့သွားရင်တော့ ရှယ်ရကျိုး နပ်တာပေါ့လေ။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘယ်ဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဘဲနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေ မျိုးလည်း ကြုံတတ်ပါတယ်။ ဒါဆို ကိုယ့် အီးမေးလ်ထဲက ကီးတစ်ခုဟာ အတော်လေး အကျိုးသက်ရောက် လာမယ် မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Labels: Free key, software
Free KAV 2009 Genuine key for6months
/ 23:27 / Comments: (0)
Kaspersky 2009 ရက် ၁၀၀ မကုန်ခင် ခြောက်လ လိုင်စင်ကီး ရမယ့် နည်းလေးထပ်တွေ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယကက်စပါဆိုဒ် မှာ ဖရီး ပေးတာပါ။ ဒေပါဝလီ ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ် ပရိုမိုးရှင်း ထင်ပါရဲ့။
ရယူပုံက ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်မှာ register လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ မိမိ အီးမေးလ် မှန်ဖို့ဘဲလိုပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ အဆင်ပြေသလို ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်ရ်ျများ အီးမေးလ် နှစ်ခုလောက် ရှိရင် ကီးနှစ်ခုလောက် ရယူထားသင့်တယ်။ Offline key file တစ်ခုလုပ်ပြီး online & offline register လုပ်ရင် သုံးလထပ်တိုးပြီး ကိုးလသက်တမ်း သုံးနိုင်သွားမှာပါ။
ချက်ချင်းတော့ မပို့ပေးဘူးနော် တစ်ရက်ကျော် အနည်းဆုံးစောင့်ရတယ်။
ကီးတွေကြောင်လို့ ကြိုးညှိရင်း မိုးမလင်းရအောင် ကက်စပါ ပရိသတ်ကို ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ ဒါမျိုးက ရက်အကန့်အသတ် အတွင်း ပေးတာဆိုတော့ မြန်မြန်သာ တိုးထားလိုက်တယ် ;)
Go to register this link
Labels: Free key, kaspersky
/ 00:56 / Comments: (0)
A quick note about firmware:The firmware of the iPhone is essentially the OS. To find out which version you currently have, on your iPhone go to Settings>General>About>Version. There you will see your firmware version.
/ 00:42 / Comments: (0)
ဂိမ်း နောက်ထွက်တာတွေက ဟတ်ဝဲလ် လိုအပ်ချက်ကြီးမားလာလို့ ၀ယ်ပြီးမှ သုံးလို့ အဆင်မပြေတာတွေ ကြုံကြရတတ်တယ်။ High-end user တွေ တော့ အေးဆေးပေါ့။
ဆိုင်တွေက ဘာ ဟတ်ဝဲလ် သုံးထားလဲ မေးကြပေမယ့် ဘယ်လောက်ထိ match ဖြစ်မလဲ ကြိုသိထားရင် ပိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့ ၀ယ်ပြီးမှ သုံးလို့ ရရုံလေက်သာ ကြုံတတ်တယ်။
အ၀ယ်မမှားရအောင် ဒီဆိုဒ်မှာ ကြိုတင် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မိမိ သုံးချင်တဲ့ ဂိမ်း အမျိုးအစား ကိုရွေးပြီး Can You Run It ကို နှိပ်လိုက်ရင် မိမိ ကွန်ပြူတာကို အန်နာလိုက်စ် လုပ်ပြီး အသေးစိတ် ဖေါ်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထွက် ဂိမ်းတွေလည်း အပ်ဒိတ်လုပ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။
အနိမ့်ဆုံး လိုအပ်ချက် မပြည့်စုံရင် fail ပြနေပါလိမ့်မယ်။ အောက်က ပုံမှာ supreme commander နဲ့ စမ်းသပ်ထားပြီး လိုအပ်တဲ့အပိုင်း ကို ပြနေပုံပါ။
Gamer တွေ system requirement ကြိုတင် စမ်းသပ်နိုင်မယ့် ဆိုဒ်လေးပါဘဲ။ Java plugin ရှိဖို့နဲ့ popup blocker ပိတ်ထားဖို့တော့ တောင်းဆို ထားပါတယ်။ ဂိမ်းအသစ်တွေ ၀ယ်တော့မယ်ဆို ကြို စမ်းထားတော့ အမှားကင်းပြီပေါ့...
/ 21:38 / Comments: (2)
ဖိုင်ဆိုဒ်က 1.7 MB ဆိုတော့ သူ့ကြောင့် တိုးလာမယ့် space တွေ အတွက် ကျွန်တော်တော့ ပြန်မဖြုတ်နေတော့ပါဘူး :)
/ 23:26 / Comments: (2)
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ သက်တမ်း ရှိတဲ့ Kaspersky Internet Security 2009 key ဖရီးရဦးမယ်ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားကြရင် စမ်းကြည့်ကြပါဦး။ လွယ်လွယ်ကူကူ ပါဘဲ။ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ။
Computer Shopper က စာဖတ်သူတွေကို ပရိုမိုးရှင်း လုပ်တာပါ။ လုပ်ရမှာက...
http://www.coverdisc.co.uk/cs249/kis/index.php လင့်ကိုသွားပြီး အချက်အလက်တွေ ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ပေးရပါတယ်။
ဒုတိယ အဆင့်မှာ ပရိုမိုးရှင်း ကုဒ် also ကို ထည့်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ မေးလ်မှာ ကီး ရောက်လာပါမယ်။
အမှန်အကန် ၀ယ်သုံးနေသူတော့ မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ Blacklist ဖြစ်ဖြစ် နေတတ်သူတွေတော့ အသုံးတည့်မှာပါ။
Labels: Free key, kaspersky, software, Virus
/ 15:53 / Comments: (0)
မူရင်း ဂျီမေးလ် မှာ labs icon သို့ setting \_labs \_Holiday Time! မှာ enable လုပ်ပြီး setting save လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Standard version သုံးနေမှ တွေ့ရပါမယ်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ setting \_general \_Out of Office AutoReply သွားပြီး on mode ကို ရွေးရပါတယ်။ ရက်စွဲ၊ခေါင်းစဉ်၊အကြောင်းအရာ တွေ စိတ်ကြိုက် ချိန်ညှိပြီး contacts က မေးလ်ဘဲ ပြန်စေမလား အ၀င်စာ အားလုံး ပြန်စေမလား ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ခရီးထွက်နိုင်ပါပြီ။
/ 20:23 / Comments: (0)
အင်္ဂလန်မှာ PCtools internet security 2009 Genuine License Key တွေ free ပေးနေတယ်ဆိုလို့ သွားတိုးတာ 1 Year key ရခဲ့တယ်။ KIS 2009 လောက် ပေါ်ပြူလာ မဖြစ်ပေမယ့် key ပြသနာ ခေါင်းခြောက်နေရင် ပြောင်းသုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်က ၀ယ်ရင် ၃လုံးသုံးနိုင်မယ့် လိုင်စင်က 59.95$ ကျသင့်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည် အသေးစိတ်ကတော့ မူရင်းဆိုဒ် မှာ ညွန်းထားပါတယ်။ ကိုယ့်နာမည် ကိုယ်ပိုင် ကီး ဆိုတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။
1.http://defilter.co.uk/ ကို သွားပါ။ ကျော်သွားရပါတယ်။ အင်္ဂလန် IP ရနိုင်တဲ့ တခြား webproxy ဆိုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
2.http://www.pctools.com/internet-security/free/promo/PCADVISOR0809/ ဖြည့်ပြီး GO ပေါ့။
3.မိမိ နာမည်၊အီးမေးလ်၊လိပ်စာ ဘာဘာညာညာတွေ(အီးမေးလ်ကလွဲရင်) ဖြီးတာပေါ့။ အဓိကက promotion code ပါ။ " jkm3cx " ထည့်ပေးပြီး request လုပ်လိုက်ရင် အီးမေးလ်ထဲ ကီးရောက်လာပါမယ်။
4.ဒီကနေ ဆောဖ့်ဝဲလ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ် ကီးဖြည့်ပြီးရင် အမှန်အကန် သုံးပေရော့ဗျာ။
2000,XP and Vista 32bit တွေ တင်လို့ ရပါတယ်။ ကီးတောင်းတာ အဆင်မပြေဖြစ်ရင် မေးလ်ပို့လိုက်ပါ။ ကျွန်တော် တန်းစီပေးပါ့မယ်။ အဆင်ပြေမှာပါ။
/ 06:06 / Comments: (0)
Rapidshare က file တွေကို free download လုပ်နိုင်ပေမယ့် IP,Download limit အခက်အခဲကြောင့် နှောင့်နှေး နေတတ်ပါတယ်။ Rapidshare Premium Link Generators တွေသုံးရင်လည်း အတော်အတန် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ပရီမီရမ် အကောင့်လောက် မမြန်ပေမယ့် ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာတွေ သုံးနိုင်သွားပြီး download limited ကို ကျော်လွှား သွားနိုင်ပါမယ်။
Forum,sharelinks အပြင် သီးသန့် ဖိုင်တွေကို ရှာပေးနိုင်တဲ့ rapidshare search engine တွေ နဲ့ လိုချင်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ရှာနိုင်ပါတယ်။ ရရှိပြီးပြီ ဆိုရင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မယ့် လင့်ကို Rapidshare Premium Link Generators မှာ copy/paste လုပ်ပြီး generate လုပ်မယ် ရလာတဲ့ လင့်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရုံပါဘဲ။ အသုံးဝင်မယ့် လင့် တစ်ချို့က....
ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရာမှာ ကွန်နက်ရှင် ကောင်းမကောင်း တစ်ရက် လင့်မည်မျှ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နိုင်မှု တွေကို ဂရုပြုရပါတယ်။
Labels: Cool website, Rapidshare
/ 10:25 / Comments: (0)
Firefox3ကို ပိုပြီး အသုံးချလာနိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ စုစည်းထားတာပါ။ About:config သုံးပြီး မြန်နှုန်းမြှင့်ခြင်း၊မန်မိုရီ လျှော့ချခြင်း တွေလို Firefox3ရဲ့ တိမ်မြုတ်နေတဲ့ စွမ်းအားတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင် လာပါမယ်။ Hack for Firefox3မှာ ရေးပြီးခဲ့သမျှ နဲ့လည်း တွဲဖက် ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
about:config ကို Url bar မှာ ရိုက်လိုက်ပါ။ သတိပေးချက် ပြလာတော့ I`ll be careful I promise ပေါ့။ နောက်တစ်ကြိမ် မတွေ့ရအောင် ဖြုတ်ခဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
1.Consumes less memory and CPU usage
Filter bar မှာ browser.cache.memory.enable ကိုရိုက်ပြီး value ကို double click ဖြင့် true သို့ ပြောင်းပေးပါ။
ပြီးလျှင် right click \_new \_integer ရွေးပြီး popup windows မှာ browser.cache.memory.capacity ကို ဖြည့်ပေးပါ။
ထပ်မံပြီး သူ့တန်ဖိုးကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
ဥပမာ မိမိ RAM Memory က 256 MB နှစ်ချောင်း ရှိရင် 8192 ကို ဖြည့်ပေးရပါတယ်။ Start /control panel /system မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်တင် အလုပ်လုပ်ဖို့ restart လုပ်ပေး ရပါတယ်။ firetune addon သုံးထားရင် မလိုပါဘူး။
nglayout.initialpaint.delay 100 to 0
3.Auto Complete URL while You type at address Bar
4.Disable Delay Time While Installing Firefox Add-on
5.Disable Extension Compatibility Checks
6.Stop Displaying Website Icon (Favicon) in Address bar & On Tab
Helpful for frequent Google searcher, low-speed internet connection or low RAM
8.Extend Spell check to forms
9.Disable Blinking Text
10.Disable Annoying Browser Behavior
11.Remove Tab Close Button from all Tab and set A single Close Button at Right
12.Disabler Browser Toolbar Tip
13.Show More Tabs on Single Firefox Window before Scrolling
14.Past Copy Content with Middlemouse Click
15.Scroll webpage in One Go
16.Increase History Undo Close Tab Limit ( Recently Closed Tabs )
17.Open Firefox Default Search Bar Result in New Tab
18.Right Click View Source in Your Favorite Editor
19.Enable/Disable Single Click to Select Whole URL in Address bar
browser.urlbar.clickSelectsAll = True ( for enable )
browser.urlbar.clickSelectsAll = False ( for disable )
20.Fast Scrolling Across Tabs
75 is number of pixels to scroll atatime when scrolling the tab strip’s scrollbox. (Default: 20)
စမ်းသပ်ရင်း မှားနိုင်တယ်၊မကြိုက်လို. ပြန်ဖျက်နိုင်အောင် backup ကြိုလုပ်ထားလိုက်ပါ။
Labels: Browser, firefox, Hack, speed up
/ 21:13 / Comments: (0)
ကွန်နက်ရှင် ကို မှတ်တမ်းတင် ထားနိုင်ကြစေရန် အလို့ငှာ website နှစ်ခု ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အောက်ကပုံလေး နှိပ်ပြီး စမ်းဖြစ်အောင် စမ်းသွားလိုက်ပါဦး။ 256 Kbps reset ကတော့ ရှယ်ဘဲ။
Labels: Cool website, speed up
/ 04:19 / Comments: (0)
Gtalk,Gmail နဲ့ Cbox တွေ ကို add-ons မသုံးဘဲ firefox မှာပေါင်းထည့်ထားကြရအောင်။ ကိုယ်ပိုင် Cbox မဟုတ်လည်း တခြား Cbox မှာ မေးထား ပြောထားတာတွေ စောင့်ကြည့်ဖို့ သုံးနိုင်တာပေါ့။
လွယ်ပါတယ်..Gtalk အတွက် http://talkgadget.google.com/talkgadget/popout မှာ login ၀င်ပြီး Url bar က star လေးနှိပ် bookmark toolbar ပေါ်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့။
Bookmark toolbar ပေါ်က Gtalk icon ပေါ်right click \_properties သွားပြီး load this bookmark in the sidebar ကို အမှန်ခြစ်လေး ပေးခဲ့ရင် ရပါပြီ။ Firefox မှာ ၀န်မပိစေဘဲ အိုင်ကွန်လေးနှိပ်ပြီး ချတ်နိုင်ပါပြီ။
Cbox အတွက်ကတော့ Cbox link တစ်ခုမှာ rightclick \_this frame \_bookmark this frame ရွေးပြီး Gtalk အတိုင်း load this bookmark in the sidebar ကို အမှန်ခြစ် ပေးလိုက်ရုံပေါ့။
Gmail ကို https://mail.google.com/mail/feed/atom လင့်ကနေ login ၀င်ပြီး bookmark toolbar မှာပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို စာအ၀င် သိနိုင်ပါပြီ။
အားလုံးကို logout မလုပ်ဘဲ master password ခံသုံးရင် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ Tools \_options \_security \_change master password မှာ နှစ်သက်ရာ password ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ အသုံးဝင် လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
Labels: Browser, firefox, Gmail, Gtalk, odds and ends
/ 01:50 / Comments: (0)
/ 06:08 / Comments: (0)
Firefox မှာ Google Chrome addons ပေါင်းထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ Firefox သုံးရင်း လင့်တွေကို အလွယ်တကူ chrome နဲ့ ပြောင်းဖွင့် သွားနိုင်ပါတယ်။ တွဲသုံးဖို့ ဒေါင်းလုဒ် မလုပ်ရသေးရင် google chrome portable သို့ မူရင်းဆိုဒ် က ယူထားနိုင်ပါတယ်။
GC (google chrome) က မပြည့်စုံသေးတော့ FF(firefox) ဘဲ သုံးနေရတာပေါ့။ FF ကို proxy နဲ့ သုံးရင်း မကျော် မခွရတဲ့ လင့်တွေကို rightclick လေးနဲ့ GC ကဖွင့်သွားရင် တော်တော် အလုပ်ရှုတ် သက်သာသွားတယ်။
Open-in-google-chrome.xpi ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီး FF မှာ ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို addon install လုပ်သွားပါမယ်။
FF restart လုပ်ပြီး tools \_addons \_open in google chrome \_options ကို အဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ပါ။
Google Chrome Options Windows မှာ C:\_Documents and Settings\_Administrator\_Local Settings\_Application Data\_Google\_Chrome\_Application\_chrome.exe (for xp) or C:\_Users\_Administrator\_AppData\_Local\_Google\_Chrome\_Application\_chrome.exe (for vista) ကို copy/paste ဖြည့်ပြီး ရင် ရပါပြီ။ Administrator နေရာ မိမိ အကောင့် ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ Manual Browse လုပ်ရင်တော့ show hidden files and folders ကို folder options မှာ ရွေးထားပေးပါ။ Folder options က ဗိုင်းရပ်စ် နှိပ်စက်လို့ လူတိုင်းလောက် သိမှာပါ :-)
Navigation toolbar က home bottom ဘေးမှာ ခုလို ပေါ်နေအောင် toolbar \_rightclick \_customize သွားပြီး drag n drop ဆွဲထည့်ထားလို့ ရပါတယ်။
/ 05:20 / Comments: (0)
Firefox user တွေ Google Chrome Browser (GC) ကို သုံးကြည့်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးက addons ဖြစ်နေပါတယ်။ Toolsbar မပါ addon မရှိလို့ အခက်တွေ့နေရင် ဒီက ယူသုံးလိုက်ပေါ့ဗျာ။ လွယ်သလား မမေးနဲ့ GC bookmarks bar ပေါ်drag and drop ဆွဲထည့်လိုက်ပါ။ သုံးနေကျ တွေမို့ ရှင်းပြနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူးနော့.........
12.Google Apps Mail
/ 00:23 / Comments: (0)
Firefox3ရဲ့ သွင်ပြင်သစ် တစ်ခုက ဒေါင်းလုဒ် ပြီးသွားရင် ဗိုင်းရပ်စ် စစ်ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ အန်တီဗိုင်းရပ်စ် ပရိုဂရမ် ကောင်းကောင်းရှိရင် ဒီအဆင့်ကို ဖြုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ စက္ကန့် ပိုင်းလောက်သာ ဆိုပေမယ့် မလိုအပ်ဘဲ အကြိမ်များစွာ မစောင့်ရအောင် ဖြုတ်ထားလည်း ပြသနာ မရှိပါဘူး။
Firefox ရဲ့ address bar မှာ about:config ကိုရိုက်ပါ။ သတိပေးချက် ပေါ်လာရင် ဆက်နှိပ်တာပေါ့။
Filter bar မှာ " scanWhenDone " ကိုရိုက်ပြီး " browser.download.manager.scanWhenDone " ကိုရှာလိုက်ပါမယ်။
Preference Name မှ " browser.download.manager.scanWhenDone " ရဲ့ value ကို double click ဖြင့် false သို့ ပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် auto scan ကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ Restart ပြန်လုပ်စရာ မလိုဘဲ ဒေါင်းလုဒ် ပြီးသွားတိုင်း scan လုပ်ခြင်းအဆင့် ပျောက်ကွယ် နေပါလိမ့်မယ်။
/ 22:43 / Comments: (0)
Blog တွေမှာ Google Analytics ကို အတော်များများ သုံးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့ နောက်ဆုံး ရက် 30 ကြည့်နိုင်တဲ့ default view မှာ ယနေ့ အန်နာလိုက်စ် လုပ်ထားတာ ကြည့်လို့မရပါဘူး။ ဒီနေ့ အတွက် ကြည့်မယ်ဆို ဖန်တီး ရပါတယ်။
အရင်ဆုံး Google Analytics မှာ login ၀င်ပြီး မိမိ ID ယူရပါမယ်။ Dashboard ထိ သွားပြီး browser address bar မှာ ?reset=1&id= ကုဒ်ကို ရှာလိုက်ပါ။ အဲဒီကုဒ်ရဲ့နောက်က ဂဏာန်းဟာ မိမိ ID ပါဘဲ။
Google မှာ login ၀င်ပြီး အထက်က ကုဒ်တွေကို address bar မှာ copy/paste နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ။ အဆိုပါ လင့်ကို bookmark toolsbar ပေါ်သိမ်းဆည်းပါမယ်။ Toolsbar ပေါ်က today analytics icon ပေါ်right click \_properties သို့ သွားပြီး Location ရဲ့ ?reset=1&id= နောက်က YOURID နေရာမှာ မိမိ ID အစား သွင်းပေးပြီး ok ပေါ့။
နောက်ပိုင်း Toolsbar က icon ကို နှိပ်ပြီး မိမိ web blog တွေရဲ့ ရောက်ဆဲ analytics ကို ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ IE နဲ့ firefox နှစ်မျိုးလုံး မှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Google ချစ်သူတွေ ပျော်ရွှင် ကြပါစေ....
Labels: Analytics, Google, odds and ends
/ 22:31 / Comments: (0)
Google က ဘရောက်ဆာသစ် ထွက်လာလို့ စမ်းသုံးကြည့်မိတယ်။ Beta version ပေမယ့် အတော်လေး လန်းတယ်။ XP/VISTA support ဖြစ်ပြီး ပါးလွှာ ရှင်းလင်းနေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ Opensource အဖြစ် ပေးထားပြီး feature တွေကလည်း သုံးကြည့်သလောက် နှစ်သက်မိတယ်။
Opera ရဲ့ speeddial လိုမျိုး ctrl+t နဲ့ ခေါ်လိုက်ရင် recent boomarks လေးကိုမြင်ရပါတယ်။ Tabs ကိုလည်း drag n drop အလွယ် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တယ်။
Mail ကိုဖွင့် create application shortcuts နဲ့ desktop ကို ရွေးပေးလိုက်ရင် နောင် မေးလ်ကို web apps တစ်ခုလို ကလစ်လေးနဲ့ အလွယ်သုံးနိုင်သွားပါတယ်။
search box ကို သီးသန့်မဟုတ်ဘဲ url bar မှာ တွဲထားပြီး ယ္ခင် သုံးခဲ့တဲ့လိပ်စာ နဲ့ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် တစ်နေရာတည်း ရွေးချယ်ရပါတယ်။ Search enging ပြောင်းဘို့ တော့ option သွားခိုင်းထားတယ်။
Incognito windows ကသုံးရင် history,cookie,cache တွေ ပြန်ဖျက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
Taskmanager က ဖွင့်ထားတဲ့ tabs ရဲ့ memory,cpu,network သုံးစွဲနေမှု အခြေအနေကို ကြည့်နိုင်ပြီး မလိုအပ်တာကို ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Surf လုပ်ချိန်ဟာ safari,firefox တို့လောက်ကို မြန်ဆန်ပါတယ်။ Proxy setting ကို IE ကယူပေမယ့် fonts ကိုတော့ firefox လို ရွေးပေးရုံပါဘဲ။
Developer tools ကလည်း ပြည့်စုံအောင် အားဖြည့်ပေးထားလို့ web developer တွေ အကြိုက်တွေ့စေပါမယ်။
Firefox ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ကို မယှဉ်သာပေမယ့် IE 8 beta2ထက်တော့ အပြတ်သာပါတယ်။ Google products က အတော်များများ ယူသုံးနေတော့ Google chrome ကိုရော သင် နှစ်သက် မှာလား...
Labels: Browser, Chrome, Google, software
/ 05:28 / Comments: (0)
Blue screen errors ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ PP က မေးလို့ error code ကို ဓါတ်ပုံရိုက် ထားပေးပါလို့ ဖြေလိုက်တယ် :) ။ တစ်ကယ်လည်း သူက ခဏသာပေါ်ပြီး ရီဘုဒ် လုပ်သွားတော့ ကူးရခက်တယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာရင် ကင်မရာ မဆောင်ရတဲ့ နည်းလေး ရှိပါတယ်။ အဲ... ကုဒ်ရရင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတော့ ဂူဂယ်မှာ ရှာကြည့်ပေါ့..အဟီး....
Computer icon ပေါ်right click ထောက်ပြီး properties ကိုရွေးပါတယ်။ System properties screen ရဲ့ ဘယ်ဘက်က Advanced system settings ကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Startup and Recovery ရဲ့ setting ကိုနှိပ်ပြီး automatically restart ကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။
အထက်ပါ နည်းလမ်း မပြောင်းရသေးခင် error restart ဖြစ်ခြင်း ကြုံလာလျှင်လည်း F8 key ကို boot တက်ချိန် နှိပ်ထားပြီး Advanced Boot Options မှာ disable automatic restart on system failure ကိုရွေးပေးလျှင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို နောက်တစ်ကြိမ် failure ဖြစ်လာရင် error code ကို ကူးယူနိုင်အောင် BSOD က ရပ်နေပါပြီ။ Manually reboot ပြန်လုပ်တာပေါ့။
“Error ဖြေရှင်းပုံများကို ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပါမည်”။
/ 00:44 / Comments: (2)
/ 07:49 / Comments: (0)
/ 21:01 / Comments: (0)
Mygazines ဟာ မဂ္ဂဇင်း များစွာ ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ flash based ဖြစ်လို့ adobe flash player
လေးတော့ ရှိပြီးသား ဖြစ်ရပါမယ်။
လူကြိုက်များတဲ့ မဂ္ဂဇင်း အဟောင်း အသစ် အတော် များများ ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မိမိ မဂ္ဂဇင်း တွေကိုလည်း အပ်လုဒ်တင် ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Arts & Culture, Automotive, Books, Catalogues, Children & Teens, Common Interests, Computers & Internet, Electronics & Audio, Entertainment & TV, Hobbies & Crafts, Home & Garden, Mens's Interests, News, Business & Money, Professional & Trade, Sports, Travel, Womens's Interests ကဏ္ဍ ပေါင်းစုံမှ မဂ္ဂဇင်းများ ဖတ်ရှု နိုင်ဖို့အတွက် မန်ဘာ ဖြစ်ထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်း အသစ်ဖြစ်ဖြစ် အဟောင်းဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်မယ်ဆို Mygazines ကို ၀င်ကြည့်လိုက်ပါဦး.....
/ 20:43 / Comments: (0)
ပုံများကို စာသားဖြင့် တည်ဆောက် ထားမှုမျိုး ပြောင်းလည်းပေးတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ။ မူရင်း ပုံများ တိုက်ရိုက် မတင်လိုရင် သို့ ဆန်းသစ်သော စိတ်ကူး အဖြစ် ပြောင်းလည်း တင်ပြ နိုင်ပါတယ်။ ပုံကို Upload တင်ပြီး HTML,ASCII,Mstrix style တို့သိုို့ နှစ်သက်ရာ အရောင် အရွယ်အစား များဖြင့် ပြောင်းလည်း ပေးပါတယ်။ text-image.com မှာ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလည်း ကြည့်လိုက်ပါ။